यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (असार २६ गते बिहीबार)::Leading Nepal News
आज वि.सं. २०७६ साल असार २६ गते बिहीबार, तदनुसार ई. सं.२०१९ जुलाई ११ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ हुनेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना पनि रहेकेखा छ । आत्मबल र उत्साहमा बृद्धि हुने छ । तर्क, विवाद र बहसमा विजयी भइने छ । गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । छात्रछात्राले पढाइमा त्यति मन नलगाए पनि कुनै न कुनै नयाँ कुरो सिक्ने मौका छ ।कामदारहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)आज व्यापारमा विशेष फाइदा मिल्नेछ । आज सबैका लागि पुरानो समस्यालाई निवारण गरी अघि बढ्ने समय हो । कीर्तिमानी काम गरी प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र आँटेका काम पनि सजिलै सम्पादन हुनेछन् । गृहिणीहरूले माइतीपक्षको शुभ समाचार सुन्न पाउने छन् ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आज बनिसकेको काम पनि बिग्रन सक्छ, सचेत भई काम गर्नुहोला । स्वास्थ्य कमजोर रहला तर कामधन्दा र जिम्मेवारीमा कमी आउने छैन । आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् । व्यावसायिक काममा खर्च बढ्ने र काम पूरा नहुनाले खिन्नता बढ्नेछ । तर सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ । विदेशमा बस्नेका लागि नचिताएको आम्दानी हुने दिन छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आज नाम, दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने दिन छ । रोकिएका कामलाई पुनः सुरु गर्ने वातावरण मिल्नेछ । सहयोगीहरूले अप्रत्यासित ढंगले सहयोग गर्नेछन् । धैर्य एवं लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ । रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिने छ । परिवारजनका आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न सकिने छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज प्रयत्न गर्दा मनग्ये फाइदा उठाउन सकिने दिन छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने छ । वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ । टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) आज गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्ये लाभ हुनेछ । गृहिणीहरूलाई इष्टमित्रको साथसहयोग मिल्नेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) आज सचेत र सतर्क रहनुहोला, समयमा होस नपुग्नाले हुनै लागेको आम्दानीमा बाधा पुग्न सक्छ । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिने छ । परदेशमा बस्नेहरूले रामरमाइलो र घुमघामको अवसर पाउने छन्, तर केही रकम खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ । छात्रछात्राले गरेको कडा मिहिनेत र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सोचेको लाभ प्राप्त हुनेछ । कडा मिहिनेतका कारण रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् । विद्यार्थी र युवायुवतिले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ ।शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । परिवारजनबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) आज आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुनसक्छ । गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सकिने समय छ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिने छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिने छ । उद्योगधन्दा र व्यापारमा विशेष फाइदा हुने समय छ । विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्ने समय छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आज आत्मविश्वास र हिम्मतका साथ अघि बढेमा कीर्तिमानी काम सम्पादन हुनसक्छ । फजुलको यात्रा र घुमघामको सम्भावना देखिन्छ । मनमा निराशा र वैराग्यका बादल मँडारिने सङ्केत छ । जुनसुकै काम गर्दा सचेत र सावधान भएर गर्नुपर्छ, किनभने जस पाउने समय छैन, गरेका कामको सर्वत्र आलोचना हुनसक्छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) आज विरोधी र प्रतिद्वन्द्वीहरूले तपाईंलाई अप्ठ्यारोमा पार्न ठूलै चलखेल गर्ने सङ्केत छ । त्यसैले सचेत हुनुपर्छ, जुनसुकै काम गर्दा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । विपरीत लिङ्गीहरूबाट पनि सजग रहनुहोला । आर्थिक रूपमा नोक्सानी हुनसक्छ । कामबाट समुचित मूल्याङ्कन प्राप्त हुँदैन । परिवारजनसँगको आत्मीयतामा पनि कमी आउने छ । प्रेमसम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्न सक्छ । बाटो काट्दा वा सवारी हाँक्दा सचेत हुनुपर्छ ।